हाडजोर्नी दुखाई देखि माेटाेपन घटाउनका लागी अचुक औषधिकाे काम गर्छ डल्ले खुर्सानीले, यस्ता छन् अचुक फाइदाहरु – Khabaarpati
June 10, 2021 goodmamLeaveaComment on हाडजोर्नी दुखाई देखि माेटाेपन घटाउनका लागी अचुक औषधिकाे काम गर्छ डल्ले खुर्सानीले, यस्ता छन् अचुक फाइदाहरु
एजेन्सी । डल्ले खुर्सानी स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिसहरको भान्सामा हुने गर्दछ । खुर्सानि सानो बोटमा फल्ने गर्दछ ।
यसको सेवन गर्दा धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसको सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई हुने फाइदा यसप्रकार छन् । खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छौं । त्यसमा नि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ ।
डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा अल्सर जसता रोगको औषधी समेत हुन्छ । डल्ले खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पु-राउछ ।
यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ । त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीका निम्न फाइदाहरु रहेका छन् । यसको नियमित सेवन गर्दा मोटोपन घटाउछ ।
रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । डल्ले खुर्सानिले सवैभन्दा पि-“सावको विरामीलाई लाभदायक छ । यसले हाडजोर्नी लगाएतका दुखाइका बिरामिलाई पनि निकै फाइदा पुर्याउछ ।
डल्ले खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पु-राउछ । यो खुर्सानीको नियमित सेवनले रोगहरू निको हुन्छ । त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीका निम्न फाइदाहरु रहेका छन् । विशेष गरेर अकवरे खुसार्नी हालेर बनाईएको परिकारमा कि- टाणु-को संक्रमण कम हुन्छ र थकाइ मेटाउछ । एजेन्सीको सहयोगमा
यो पनि पढ्नुस: लज्जावती झारको अदभूत औषधिय गुण, यसरी खानुहोस घरमै बनाएर कयौं रोगबाट छुट्कारा मिल्नेछ
एजेन्सी । लज्जाबति झारलाई लाजवंती वा लाजमान्ने झारको नामले पनि चिनिन्छ। यसको बानस्पतिक नाम भने माईमोसा पुदिका हो। हात वा अन्य कुनै बस्तुले छुने बित्तिकै यसको पात ओइलाएर बन्द हुने हुनाले यसलाई लाजवन्ति झार भनिएको हो । गाउँघरतिर यसलाई गाइबस्तुको घाँसको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ।यस बाहेक यसलाई जडिबुटि वा औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अभुमका हर्बल प्रा लि अहमदाबादका डाइरेक्टर डा दीपक आचार्य यहि झारको औषधिय गुणको बारेमा बिगत १५ बर्षदेखि भारतको बिभिन्न क्षेत्रमा रहेर अध्ययन गरिरहेका छन् । भारतको सुदूर आदिवासी अंचल जस्तै पातालकोट (मध्यप्रदेश), डांग (गुजरात) र अरावली (राजस्थान)का आदिवासिहरुले कसरि परम्परागत रुपबाट यसलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र र यसले कसरि काम गर्छ भन्ने उनले अध्ययन गरेका छन् र यसलाई प्रमाणित गर्दैछन्।
कस्तो रहला तपाईको शुक्रबारको भाग्य ! जेठ २८ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आँखाको मुनी देखिएको ‘डार्क सर्कल’ ले लज्जित हुनुभएको छ ? यसरी पाउनुहोस् मुक्ति
November 8, 2020 Khabar Pati
यस्तो भएको दाँतले निम्त्याउँछ मुखको क्या न्सरको खतरा !
December 12, 2020 December 12, 2020 Khabar Pati